Business - SAGARWINE
All Categories BusinessGeneralHealthPoliticalTechnology
On: 15 May 2022 Comments:0Views: 8
Adam Smith က ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းက အလုပ်သမားခ၊ အမြတ်နဲ့ ငှားရမ်းခ စတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုထဲက တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ ခုလုံးနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ အလုပ်သမားခ၊ အမြတ်နဲ့ ငှားရမ်းခ ဆိုတာတွေက ...
On: 01 May 2022 Comments:0Views: 1
လုပ်ငန်းခွင်မှာ မကြာခဏပြောသင့်တဲ့ စကားစု ၂၄ ခု
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်အပေါ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်ဝင်စားဖို့၊ ကိုယ်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ ဘာတွေပြောမလဲ။ ဘယ်လိုစကားတွေက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အပြုံးနဲ့အတူ တောက်ပစေမလဲ။ CareerBuilder စစ်တမ်း အရ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သူတို့ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ မှတ်မိနေမယ်ဆိုရင် အလုပ်ခွင်မှာ ...
On: 27 Apr 2022 Comments:0Views: 0
နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ကျော်သက်တမ်းရှိ တူရိယာကုမ္ပဏီ Steinway ကို IPO တင်
နယူးယောက်အခြေစိုက်၊ သက်တမ်း ၁၆၉ နှစ်ရှိတဲ့ ပီယာနိုထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ Steinway Musical Instruments Holdings Inc ဟာ အများပိုင်အဖြစ် စတင်ပြောင်းလဲကာ NYSE ရှယ်ယာများစတင်ရောင်းချဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာပဲ IPO (initial public ...
On: 30 Mar 2022 Comments:0Views: 0
ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ယှဥ်တဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု (Intelligent Negotiation)
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေက ပျော့ကွက်တွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်သလဲဆိုတာ သိ အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရေရှည်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အကျိုး ရနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ အယူအဆ ဟားဗတ်စီးပွားရေးပညာသင်ကျောင်း (HBS) ရဲ့ ပါမောက္ခ ...
On: 09 Feb 2022 Comments:0Views: 0
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့အခါ အသုံးဝင်မယ့် အချက် ၄ ချက်
စွန့်ဦးတီထွင်သူဖြစ်နိုင်မယ့် အလားအလာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် လူတိုင်းစွန့်ဦးတီထွင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ်စလုပ်မယ့်လုပ်ငန်း၊ ကုန် ပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်ပယ်၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကအစ အသေးစိတ်သိထားရမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ အတွေးအခေါ်တွေကို အသုံးပြုတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်စတင်မယ့်လုပ်ငန်းဟာ ကိုယ်ကောင်းကောင်းတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်တော့မယ့်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်အချက်တွေကို ...
On: 23 Jan 2022 Comments:0Views: 0
လုပ်ငန်းတစ်ခု ယှဉ်ပြိုင်ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ ခု
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအမြဲရှိနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက အများနဲ့မတူဘဲ ရပ်တည်နိုင်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Pepsi နဲ့ KFC တို့လို နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့က ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်ကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး ဈေးကွက်ရဲ့ဝေစုကို ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပါပြီ။ အကျိုးရှိရှိနဲ့ ...
On: 21 Jan 2022 Comments:0Views: 0
ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့က မြန်မာငွေ USD $1000 လဲပေးထားတယ်။ ဟိုမှာ လိုအပ်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို သူတို့ငွေကြေးနဲ့ ဖလှယ်ပြီး သုံးစွဲနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ မသုံးရင်လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တောက တက်နိုင်ရင်ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို မသုံးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ...
On: 17 Jan 2022 Comments:0Views: 0
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့လက လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တဲ့ အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တာတွေထဲက Material Management နဲ့ Man Management အကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလမှာ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု (Financial Management) အကြောင်းကို ဆက်ရေးပါဦးမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကပြောခဲ့သလို သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ...
On: 10 Jan 2022 Comments:0Views: 0
ငွေနဲ့အချိန်ကို ဖြုန်းတီးပစ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို ရှောင်ပါ။ မန်နေဂျာအများအပြားဟာ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ရာမှာ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း လျောက်လုပ်တာမျိုး လုပ် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ အရာ မထင် အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်တယ်။ အထောက်အထား ပြည့် ပြည့်စုံစုံနဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆလည်း ...
ကနဦးလုပ်ငန်းသစ်အများစုဟာ မအောင်မြင်ကြပါဘူး။ အဲဒီလိုမအောင်မြင်အများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းခုနှစ်ခုနဲ့ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေ တိုးလာအောင် သင်ခံယူကျင့်သုံးရမယ့် မဟာဗျူဟာတွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းကို ဘယ်သူမှမစဉ်းစားချင်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကို စလုပ်တဲ့ လူတွေဟာ ဒီအကြောင်းကို မစဉ်းစားချင်ကြပါဘူး။ အမေရိကန်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ ...
ကြက်မနှစ်ကောင် ဆောင်းထဲလှောင်၊ နေ့တစ်ကောင်ထွက် ညတစ်ကောင်ထွက်။
US Election 2020 Vote!
© 2022 Sagarwine. All Rights Reserved.